एकल मालिश स्तन पंपको भूमिका के हो? - Ningbo Dearevery इलेक्ट्रनिक प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड एक
स्तन पंप आमाको लागि राम्रो सहयोगी हो। धेरैजना मान्छे जसले स्तनपान पम्प प्रयोग गर्दछन् भन्ने थाहा पाउँछ कि यो स्तन पंप प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, ताकि जब घरमै नपुगेको हुन्छ, अन्य मानिसहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाउन सक्छन्। त्यसैले मालिश स्तन पंपको प्रयोग के हो?
मालिश स्तन पंप मालिश उपकरणको एक प्रकार्य हो जुन स्तन पंप समावेश गर्दछ, जुन, मालिश प्रभाव दूध चूसने प्रक्रियामा थपिएको छ। वास्तव मा, यो मालिश स्तन पंप केवल स्तन पंप को एक मानवकृत डिजाइन हो, तर यो पनि एक निश्चित प्रभाव छ, जो स्तन सहज महसूस गर्न सक्छ, जो पछि पछि स्तन पंप को लागि धेरै उपयोगी छ।
बच्चाहरु को लागि स्नान को टोपी को उपयोग को लागि सावधानी